Ady amin'ny hain-tany sy kere :: Andrasana ny fahamatoran’ny tetikasam-panjakana any Atsimo • AoRaha
Ady amin’ny hain-tany sy kere Andrasana ny fahamatoran’ny tetikasam-panjakana any Atsimo
Mahita imaso, ary tokony hanara-maso. Nahafahan’ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, nahatsapa ny halalin’ny fahavoazan’ireo mponina any Atsimo vokatry ny hain-tany ny roa andro nandalovany tany an-toerana.
Nambara ren-tany ren-danitra ny firosoana amin’ny fanatanterahana an’ireo tetikasa fohy sy antonony ary lavitr’ ezaka mba hiadiana amin’ny hain-tany sady tsy hisian’ny tsy fahampian-tsakafo intsony any amin’ireo faritra telo: Androy sy Atsimo Andrefana ary Anosy. Raha nandamòka, na tsy notohizana, izay paikadin’ireo mpitondra teo aloha, dia andrasana kosa ny fahamatoran’ny tetikasam-panjakana hatao any Atsimo manomboka izao.
Efa natomboka mantsy saingy tsy fantatra ny fizotran’ ilay fametrahana fantsona lehibe sady lavabe (Pipeline) tokony hamatsy rano amin’ny tanàna maro any amin’iny faritra Atsimon’ny Nosy iny. Efa re ihany koa ny fampianarana sy fampiharana teknikam- pambolena mba hahafahan’ireo mponina mamboly na dia amin’ny tany maina aza. Lavalava ny lisitra raha ireo karazam-bahaolana naroso, tao anatin’ny taona maro izao.
Tamin’ity indray mitoraka ity dia nanetsika minisitera maro ny fitondrana. Nofaritana nandritra ny Filankevitry ny minisitra, tamin’ny alarobia 19 febroary lasa teo, ireo teboka maromaro momba ny asa hampahomby ny ady amin’ny hain-tany sy ny kere any Atsimo. Nanamafy ny baiko nomeny an’ireo minisitera samihafa ny Filoham-pirenena: minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana, ny Fahasalamana, ny Indostria, ny Rano, ny Trano fonenana ary ireo misahana ny fandriampahalemana. Mbola niampy ny fanabeazana ihany koa aza ireo.
Isan’ny goavana ny fametrahana an’ilay tanàna filamatra ao anatin’ny herintaona, ka hisian’ny rano fisotro madio; ny fambolena hahavita ny mponina; ireo fotodrafitrasa ara-tsosialy isan-tsokajiny… Misy asa takiana amin’ireo minisitera ireo, ary misy vokatra andrasana, afaka herintaona.
Mandra-piandry an’io fe-potoana io dia nahazo vonjy aina ireo distrika enina tena voakasiky ny hain-tany sy ny tsy fahampian-tsakafo any atsimon’ny Nosy (Amboasary Atsimo, Ambovombe, Bekily, Betioky, Ampanihy, Tsihombe) rehefa notsidihin’ny mpitondra fanjakana, tamin’iny faran’ny herinandro iny. Tonga ny rano. Nisy ny sakafo. Nigadona ny fanafody. Hitombo hatramin’ny isan’ireo fianakaviana hahazo tan-tsoroka ara-bola avy amin’ny alalan’ilay tetikasa « Vatsin’ankohonana ».
Tazana niara-dia tamin’ny mpitondra ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Efa betsaka tamin’izy ireo ihany koa no heno ho niasa ho amin’ny ady amin’ny hain-tany sy ny hanoanana tany Atsimo, saingy izao mbola mitoetra izao ny olana.
Lozam-piarakodia :: Taksiborosy tapaka hisatra nahafaty mpandeha roa